LANDFALL « MMWeather Information BLOG
စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး PHAILIN-02B အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR အင်အားလျော့ကျပြီး တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား တစ်နာရီ 9knots နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on August 14th, 2013%
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR သည် တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိရာ – ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သည့် လမ်းကြောင်းသည် မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်း၏ အရှေ့ဘက် မိုင် ၃ဝခန့်(မကာအိုမြို့ အနောက်ဘက် ၁၁၇ မိုင်ခန့်)၊ Maoming မြိုက အရှေ့ဘက် မိုင် ၆ဝ ခန့်သို့ ရွေ့သွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မုန်တိုင်း ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်သည်နှင့် မြေမျက်နှာပြင်အနေအထားကြောင့် အားလျော့သွားပြီး သြဂုတ်လ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီမှ စတင်၍ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း(ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 80 knots – တစ်နာရီမိုင် ၉ဝ နှုန်းကျော်ကျော်)သို့ ကျဆင်းသွားပြီး အရွယ်အားမှာလည်း အချင်းမိုင် ၃ဝဝ ခန့် အထိ လျော့ကျသွားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
မုန်တိုင်း . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOR အင်အားလျော့ကျပြီး တရုတ်တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား တစ်နာရီ 9knots နှုန်းဖြင့် ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOL ဖိလစ်ပိုင်သို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည်
By mmweather.ygn, on August 10th, 2013%
GFS ကွန်ပျူတာ မော်ဒယ်မှ ကြိုတင် ပုံဖေါ်ခန့်မှန်းချက် အရ သြဂုတ်လ ၁ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း-UTOL (ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 70 knots) သည် အဆင့် -၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့် (ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း – 90 knots)သို့ လည်းကောင်း၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် တွင် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း(ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 100 knots)သို့ လည်းကောင်း အင်အားကောင်းလာမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 97W သည် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အရှိန်ဖြင့် အနောက်ဘက်(ဗီယက်နန်ကမ်းခြေဘက်သို့) ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၁)
JTWC . . . → Read More: အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း UTOL ဖိလစ်ပိုင်သို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည်
Leaveacomment Uncategorized MAHASEN လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတောင်ပိုင်းသို့ ဝင်သွားပြီ